ဝင်ငွေကောင်းသော Polarized Outdoor အားကစားနေကာမျက်မှန် - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
$21.11 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $47.97
Polarized အဆောက်အဦးအပြင်အားကစားနေကာမျက်မှန် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
မျက်ကပ်မှန် Optical Attribute: Polarized
Frame ကအရောင်: multi
အရည်အသွေးကောင်း။ ဖော်ပြထားသကဲ့သို့မျက်မှန်။ ငါတကယ်ကျေနပ်မိပါတယ်
အလွန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်, အလွန်အဆင်းလှသောစျေးနှုန်းအလွန်အဆင်းလှသောစတိုးဆိုင်။ ငါကအကြံပြုပါသည်။ အလွန်မြန်ဆန်စွာဖြန့်ဝေ (ငွေပေးချေမှု၏ နေ့မှစ. 22 ရက်ပေါင်း) ဒါ့အပြင်။
Perfeito! mercadoria chegou em 20 Dias! Exelente!
отличныеочкизасвоюцену, заказываюнепервыйраз) рекомендую